» “दुई महिना अघिमात्र, अमेरिका, पुगेकी बर्खा कहिले नेपाल नफर्किने, गरी सदाको, लागि संसार छाडिन् ! “दुई महिना अघिमात्र, अमेरिका, पुगेकी बर्खा कहिले नेपाल नफर्किने, गरी सदाको, लागि संसार छाडिन् ! – हाम्रो खबर
“दुई महिना अघिमात्र, अमेरिका, पुगेकी बर्खा कहिले नेपाल नफर्किने, गरी सदाको, लागि संसार छाडिन् !
“काठमाडौं । अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा गाडीको ठ’क्क’रबाट बर्खा खड्का प्रसाईको मृ,त्यु भएको छ । ४० वर्षीय मृतक प्रसाईको घर नेपालको झापामा हो । मेरिल्याण्डको प्रिन्स जर्ज काउन्टीमा सोमबार बेलुकी ६ः३० बजे उक्त दुर्घटना भएको थियो । उनलाई ठ’क्क’र दि’ने सवारी साधन प्रहरीको, नियन्त्रण रहे पनि चालक भने अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएका छन् । तत्कालै नजिकको अस्पतालमा, लगिएपनि अस्पतालले उनलाई मृत घोषणा गरेको थियो । नेपालमा झापाको बुद्धशान्ती गाउँपालिका स्थायी घर भएकी प्रसाई अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा नै बस्दै आएकी थिइन् ।”
“प्रसाईको शव नेपाल पठाउनको, लागि पारिवारिकl सल्लाह भइसकेको छ भने, नेपाली दूतावास तथा मेरिल्याण्ड राज्यका सांसद ह्यारी भण्डारी,ले शब सकेसम्म छिटो पठाउन सहजीकरण गरिरहेका छन् । मृतक प्रसाई आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन(आईओएम)मा कार्यरत थिइन् । उनी, दुई महिना अगाडि मात्र आईओएम अफगानिस्तानबाट अफगानी, शरणार्थीहरू,सँगै अमेरिका काम गर्न गएकी थिइन् ।”
“इन्टरनेशल अर्गनाइजेशन, फर माइग्रेशन आईओएममा कार्यरत प्रसाई दुईमहिना, अगाडिमात्र आईओएम अन्तरगत अमेरिकामा, काम गर्नका लागि आएकी थिइन् । सुरुमा अफगानिस्तान,बाट आएका शरणार्थीहरुको कामका लागि भर्जिनियाको फोर्टलीमा रहेको आर्मी क्याम्पमा खटाइएको थियो ।”
“अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा, कार्यरत कर्मचारीहरु,लाई प्रदान गरिने जी भिसामा, अमेरिकी आएकी बर्खा खड्का प्रसाईका श्रीमान मदन प्रसाई नेपालमै रहेका छन् । शव नेपालमा नै पठाउने तयारी भइरहेको, र भोलि फ्युनेरल होममा लगिने, पारिवारिक, श्रोतले जानकारी दिएको छ । पारिवारिक श्रोत अनुशार, शव नेपाल पठाउनका लागि मेरिल्याण्ड राज्यका सांसद, ह्यारी भण्डारीले सहयोग गरिरहेका छन् ।,